Inopindirana Komputa, senge Minority Report | Martech Zone
Chitatu, Nyamavhuvhu 16, 2006 Mugovera, Kubvumbi 16, 2016 Douglas Karr
Mukomana tekinoroji iri kuchinja nekukurumidza! Handina chokwadi chekuti vangani venyu vanorangarira Tom Cruise muMinority Report, kwaanenge achivhura ruzivo kuburikidza nechiratidziro chaicho. Hechino chiratidzo chekutanga chinoratidza chakakosha chiitiko.
Makore mashoma apfuura, yaingova yakakosha mhedzisiro. Heino vhidhiyo yeiyo nyowani chaiyo yeiyo tekinoroji ine tsananguro yekuti inoshanda sei:
Unogona kuwana mimwe mienzaniso mihombe pa Eon Chokwadi Website.
Tags: yekudyidzana komputavashoma mushumouser interface
101 Mibvunzo… Mutengi, Zvematongerwo enyika, Anosetsa uye Starbucks